एल्विस श्रृंखला, ट्विटरफ्रिष्ट, एप्पल उत्पादनहरू र अधिक धेरैको साथ अमेरिकी प्रतिशत। म मा म बाट मा हप्ता को सबै भन्दा राम्रो म म्याकबाट हुँ
एल्विस श्रृंखला, ट्विटरफ्रिष्ट, एप्पल उत्पादनहरू र अधिक धेरैको साथ अमेरिकी प्रतिशत। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ
यस हप्ता हामीले म्याक संसार र एप्पल सामान्य मा धेरै रोचक समाचार देखेका छौं, तर हामी भन्न सक्छौं कि यो कम्पनी को सब भन्दा महत्वपूर्ण हप्ता छैन।। सबै आँखाहरू आईफोन एक्सको आगमनमा सीधा केन्द्रित छन् र यो यो हो कि यस अर्थमा हाइप बढ्दै छ।
यस कारणका लागि होईन, हामीले कपेरर्टिनोबाट आउने बाँकी जानकारीलाई पन्छाउनै पर्छ, तर स्पष्ट रूपमा उनीहरूले प्रमुखता गुमाए। यसको बाबजुद पनि, हामी समाचारहरूको शृंखलाहरू हेर्न जाँदैछौं जुन हामीलाई लाग्छ रमाईलो छ र हामी भन्न सक्दछौं कि यो म्याकबाट आएको एक मुख्य आकर्षण हो।
एउटा उल्लेखनीय समाचार त्यो हो एप्पलले एल्विस प्रेस्ली miniseries रद्द गरेको छ Weinstein कम्पनी घोटाला को लागी। व्यवसायी हार्वे वाइनस्टाइन दशकौं हलिउड स्टारहरु संग यौन उत्पीडन को रिपोर्ट गरिएको थियो। समाचार कडा आक्रमण थियो र यो बनाएको छ एप्पलले वाइनस्टाइन कम्पनीसँग आफ्नो सम्झौताको बारेमा पुनर्विचार गर्नेछ.
निम्न समाचारहरू हाम्रो ट्विटर खाताहरू प्रबन्ध गर्न अनुप्रयोगसँग सम्बन्धित छ, ट्विटरफ्रि। यस अवस्थामा, लामो समय पर्खने पछाडि प्रयोगकर्ताहरू सक्षम हुनेछन् म्याक अनुप्रयोगको आनन्द लिनुहोस्।
अर्कोतर्फ, हामीले समाचारको एक टुक्रा हाइलाइट गर्नुपर्दछ कि भन्छ कि Americans 64% अमेरिकीहरू एक एप्पल उत्पादनको मालिक छन्। एप्पल वर्तमान मा एक रमाईलो विश्वभर व्यापक र बलियो उपयोगकर्ता आधारतर संयुक्त राज्यमा आधार अझ बढी छ।
अन्तिम तर कम्तिमा होइन, हामी समर्थनको घोषणाको मृत्यु भन्दा बढीको बारेमा समाचार छोड्दछौं माईक्रोसफ्ट अफिस २०११। यस हिसाबले हामीले यो स्पष्ट गर्नुपर्दछ कि यो त्यस्तो चीज हो जुन हामीले पहिल्यै र पहिले पनि कुरा गरिसकेका छौं यो हप्ता पुष्टि भयो.
आइतवारको आनन्द लिनुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » एल्विस श्रृंखला, ट्विटरफ्रिष्ट, एप्पल उत्पादनहरू र अधिक धेरैको साथ अमेरिकी प्रतिशत। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ
वोज यू, स्टीव वोज्नियाकबाट टेक्नोलोजी सिक्नको लागि एक अनलाइन प्लेटफर्म
NVIDIA GeForce Now मकको लागि बिटामा पहिले नै उपलब्ध छ, तर अझै स्पेनमा छैन